Samsung Support စင်တာအား ရှာရန် | Samsung Myanmar
စက်ပစ္စည်းပြင်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ အကူအညီရယူလိုသည်ဖြစ်စေ၊ အကြံပြုချက်ပေးလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ပ်တို့၏ တရားဝင်ပံ့ပိုးမှုစင်တာပေါင်း ၂၀ ခုသည် သင့်အားအကူအညီပေးရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းဖြန်ကျက်လျက်ရှိပါသည် ဝန်ထမ်းအားလုံးမှာ အပြည်အဝလေ့ကျင်ထားသူများဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်ရာတွင်လည်း Samsung အစိတ်အပိုင်းအစစ်ကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။ သင်လိုအပ်သော မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်နည်းလမ်းအား သိရှိရန်အတွက် အောက်ပါနေရာတွင် သင်၏စက်ပစ္စည်းအားရှာဖွေပါ။
စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလတ် သို့မဟုတ် လက်ပတ်
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ Samsung ပံ့ပိုးမှုစင်တာများသည် မှန်ကွဲခြင်းမှစ၍ အချက်အလက်များကူးပြောင်းပေးခြင်းအထိ သင်လိုအပ်သည်များအား ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်နှင့်အနီးဆုံး Samsung ပံ့ပိုးမှုစင်တာသို့သွားပါ သို့မဟုတ် ဒီနေ့ပဲဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ။
32 လက်မတီဗွီ သို့မဟုတ် ၎င်းထက်သေးသောတီဗွီ
သင့်ထံတွင် ကျွနု်ပ်တို့ကုမ္ပဏီထုတ် သေးငယ်သောတီဗွီတစ်လုံးရှိပါက သင့်အားအကူအညီပေးနိုင်မည့် အမြန်ဆုံးသောနည်းလမ်းမှာ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော တရားဝင်ပံ့ပိုးမှုစင်တာများစာရင်းမှ တစ်နေရာအား သွားရောက်ရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက 01-2399888 မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ၊ လိုအပ်သောနောက်ထပ်အဆင့်များအား ကျွနု်ပ်တို့မှ အကြံပြုပြောကြားပေးပါမည်။
PC/ ကြန္ပ်ဴတာအရံပစၥည္းႏွင္႔ ပုံႏွိပ္စက္
1. အထက်ပါရွေးချယ်စရာများစာရင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအားရွေးချယ်ပါ ( မိုဘိုင်းဖုန်းပစ္စည်းများ, အိမ်သုံးအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ စသည်ဖြင့်)
2. သင်နေထိုင်သော မြို့တော်၊ မြို့ (သို့) စာတိုက်ကုဒ်အား ထည့်သွင်းပါ
3. မည်သည့်ရလဒ်မှ ထွက်ပေါ်မလာပါက ရှာဖွေသည့်နေရာ၏ အဝန်းအဝိုင်းအား ကျေးဇူးပြု၍တိုးမြှင့်ပါ ( 20 KM ။ 30 KM စသည်ဖြင့်)
ကျွနု်ပ်တို့အား 01-2399888 မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပါ၊လိုအပ်သောနောက်ထပ်အဆင့်များအား ကျွနု်ပ်တို့မှ အကြံပြုပြောကြားပေးပါမည်။
* သတိပြုရန်၊ သင့်စက်ပစ္စည်းအား အဆိုပါနေရာတွင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာအားဆက်သွယ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
Samsung Support စင်တာအား ရှာရန် Samsung Support စင်တာအား ရှာရန်